FANABEAZANA ENY ANIVON’NY LISEA : Fandaharam-pianarana vaovao no hampiasaina amin’ny taranja Anglisy - Ministère de l'Education Nationale
FANABEAZANA ENY ANIVON’NY LISEA : Fandaharam-pianarana vaovao no hampiasaina amin’ny taranja Anglisy
Taorian’ireo dingana nolalovana dia tontosa soa aman-tsara ny famolavolana ny fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny taranja Anglisy hampiharina eny anivon’ny lisea. Tamin’ny talata 08 aogositra lasa teo no nampahafantarina izany tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny efitrano fivorian’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (MEN) Anosy. Naseho ampahibemaso nandritra izany tamin’io fotoana io ihany koa ireo kapila mangirana sy boky torolalana sy ara-pedagojia ho an’ireo mpampianatra io taranja Anglisy io. Marihina fa isan’ny nandray anjara tamin’ny famolavolana io fandaharam-pianarana taranja Anglisy vaovao hampiharina eny anivon’ny lisea io tamin’ireo tekinisiana eo anivon’ny MEN ireo solon-tena avy amin’ireo mpampianatra eny anivon’ny sekolim-panjakana sy sekoly tsy miankina, ireo mpampianatra mpikaroka eny anivon’ireo oniversite misy eto Madagasikara ary ireo mpampianatra mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ny « Peace corps ».
Toy izao manaraka izao ny vontoatiny sy ny andinindininy momba ireo boky torolalana vaovao ho an’ny mpampianatra taranja Anglisy eny anivon’ny lisea :
Ndriha Nomena TAITSY dit :
Tena mavesatra be ilay Programme 1ère nefa mba te hi-télécharger ny tena 🙁
P.S: CAPENIEN Promotion Décembre 2016
Tompoko, mba mila mba manao ezaka ny tsirairay, mijery toerana tsara fifandraisana(« connexion ») ahafahana maka azy. Misaotra.